Blogs: बाँदर भगाउने पोषिलो मोलासेस घाँस बारे बुझौं!! कहाँ बाट लिने?
बाँदर भगाउने पोषिलो मोलासेस घाँस बारे बुझौं!! कहाँ बाट लिने?
यो घास मोलासेस (mellinis minutiflora) बहुवर्षिय अकोशे घाँस हो । नेपाल को तराई तथा मध्ये पहाड या समुन्द्री सतहदेखि १५०० मिटरसम्म यसको राम्रो खेती गर्न सकिन्छ ।जातहरु :-वान्को,चेनिया,कोमुम, राक्सो , किटाले आदि माटो : सबै खालको माटोमा लगाउन सकिन्छ ।भूक्षय गयेको जमीन , नदिकटान गरेनी ठाँउ को जमिन उप्युक्त हुन्छ । बीउको मात्रा : ५ देखि ६ के.जी प्रति( २० रोपनी को लागी ) हेक्टर यसको बिउ धेरै हल्का हुन्छ। लगाउने समय : जेष्ठ देखि असार पहिलो साताभित्र सम्म लगाउन सकिन्छ ।लगाउने तरिका : यसको धेरै बीउ हल्का हुने भएकोले माटो वा बालुवा सँग मिसाएर छर्नुपर्दछ । छरिसकेपछि हल्का माटो चलाएर...
रेड क्लोभर (Red clover) Trifolium pratense L. घाँस बारे बुझौं!
परिचय : यो रातो फूल फुल्ने क्लोभर हो । शीतोष्ण जलवायुमा हुने यो सेतो क्लोभरभन्दा बढी उब्जा दिने महत्वपूर्ण बहुवर्षीय (Short-liveed perennial) घाँस हो । यो चरन–घाँस भएपनि यसलाई काटेर र हे बनाएर पनि खुवाउन सकिन्छ । यसले माटोमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण गर्ने र भू–संरक्षणमा पनि मद्दत गर्नेगर्छ । रेड क्लोभर बढी खाएमा गाईबस्तुमा पेट ढाडिने (Bloat) समस्या देखा पर्न सक्दछ । जातहरू : नेपालमा क्लोभर राणाकालदेखि नै भित्रिएको हो । पछि गएर अर्थात् सन् १९५४ तिर काठमाडौं उपत्यका तथा चिज Çयाक्ट्री वरपर यी जातका साथै अन्य चरन घाँसका बीउहरू छरिएका थिए । जसमा डेवान, ब्रोडलिफ, रेडक्वीन,...
स्थानीय स्तरमा पाइने डाले घाँस "कोइरालो" र "दबदबे"को महत्व बारे बुझौं!
कोइरालो (Bauhinia variegata) टाँकीको जस्तै पात देखिने, मध्य पहाडदेखि तराईको जंगलसम्म ठूलो वृक्षको रुपमा कोइरालो पाईन्छ । यसको पूmल र कोपिला तरकारी र अचारमा प्रयोग हुन्छ । कोईरालोको पातमा ३५–३८ प्रतिशतसम्म सुख्खा पदार्थ, १३–१४ प्रतिशतसम्म कच्चा प्रोटिन, १.६६ प्रतिशत क्याल्सियम र ०.३४ प्रतिशत फस्फोरस पाईन्छ । हेर्दा टाँकी जस्तो देखिएपनि टर्रो पदार्थ ९त्बललष्ल० बढी हुने हुनाले पशु वस्तुले राम्रोसँग मन पराएर खाएको देखिदैंन । हरियो घाँस कम भएको समयमा आश्विनदेखि पौषसम्म कोइरालोको हाँगा काटेर दुहुना गाईभैंसीलाई भन्दा थारो गाईभैंसी, जोत्ने गोरु आदिलाई परालसँग मिसाएर...
डालेघाँसहरु कुट्मिरो र बडहरबारे बुझौं!!
कुट्मिरो ((Litsea poliantha/monopotela) कुट्मिरो एउटा नरम पात र डाँठ भएको डाले घाँस हो । यो घाँस नेपालको मध्य पहाडी भागदेखि भित्री मधेससम्म बारीको कान्ला, खेतबारीको छेउछाउ आदिमा लगाईन्छ । कुट्मिरोको पात मसिना हाँगा बिंगा सवै पशु वस्तुले खुब मन पराएर खान्छन् । यो डाले घाँसको पातमा १४–१६ प्रतिशतसम्म कच्चा प्रोटिन, समय र पालुवाको अवस्था अनुसार ३०–३४ प्रतिशतसम्म सुख्खा पदार्थ १.६६ प्रतिशत क्याल्सियम, ०.३४ प्रतिशत फस्फोरस र २ प्रतिशत ट्यानिन पाईएको छ । दूध दिने गाई भैंसी र गोरु आदिको लागि यो राम्रो डाले घाँसमा पर्छ । दुई तिहाई भाग पराल र एक तिहाई भाग कुट्मिरो मिसाएर खुवाउँदा दूध...
बाख्राको लागि महत्वपूर्ण मानिने इपिल इपिल (Leucaena leucocephala) घाँस सम्बन्धि जानकारी!!
परिचय बाह्रै महिना हरियो रहिरहने भएता पनि वर्षायाममा बढी मौलाउने बहुवर्षीय कोशे जातीको बहुउद्देशीय रुखहरु मध्ये इपिल इपिल सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पोषिलो कोशे घाँसबाली हो । सन् १९८० को दशकतिर इपिल इपिलमा आक्रमण गर्ने सिलिड कीराको प्रकोप अब घट्दै गएकोले यसको खेती राम्रोसंग गर्न सकिने राम्रो संभावना देखिन्छ। साधारणतया अन्य घाँसहरु केही वर्षायाममा मात्र हुने र केही हिउ“दमा मात्र हुने हुन्छन् तर इपिल इपिल बाह्रै महिना हरियो भई उत्पादन लिन सकिने भएकोले पनि यसको महत्व बढी देखिन्छ । हालसम्म विश्वमा २२ जातका इपिल इपिलको जानकारी भइसकेको छ यी मध्ये सबैभन्दा बढी...